China chete-Danho moto-kurwa pombi fekitari uye vagadziri | Liancheng
chete-Danho moto-kurwa pombi
XBD Series Single-Danho Single-kubvisa Vertical (Horizontal) Fixed-mhando Fire-vachirwa Pump (Unit) rakagadzirirwa vanosangana moto-kurwisa zvinodiwa mudzimba maindasitiri uye chicherwa emakambani, injiniya kuvakwa uye mukuru rinobuda. Kuburikidza vakatora bvunzo neHurumende Quality Rinotungamirira & Testing Center kuti Fire-kurwa Equipment, ayo unhu uye waivako zvose zvinoenderana zvinodiwa National Standard GB6245-2006, uye ayo kuita anotungamirira pazvipfuwo zvakafanana zvigadzirwa.
1.Professional CFD dzinoyerera zvakagadzirwa Software iri wokurera, kuwedzera pombi kuti kunyatsoshanda;
2.The zvikamu mvura inoyerera kusanganisira apo pombi casing, pombi chivharo uye impeller wakaumbwa nebwe waakaita jecha aruminiyamu muforoma, kuona chechetere uye streamline kuyerera gwara uye chitarisiko uye kuwedzera pombi kuti kunyatsoshanda.
3.The zvakananga kubatana pakati injini uye pombi nyore zvenguva dzokutyaira marongerwo uye anovandudza kushanda isimbe, zvichiita pombi Unit ndimhanye stably, zvakachengeteka uye yakavimbika;
4.The mugodhi chisimbiso zvemaziso iri vanganzi nyore kuti nengura; ari rustiness kuti zvakananga-kunofambidzana mugodhi kungaita nyore kukundikana chisimbiso zvokuimba. XBD Series chete-Danho chete-kubvisa pombi anopiwa Stainless simbi ruoko kudzivisa rusting, nguva refu kuti pombi upenyu basa uye kuderedza inoyerera Nokuraramisa mutengo.
5.Since pombi uye injini dziri pamusoro chete mugodhi, zvenguva dzokutyaira mamiriro iri nyore, achidzikisa kwezvivako mutengo kubudikidza 20% maringe nemamwe munhuwo pombi.
matunhu neminisiparati ouinjiniya
S.: Max 16bar
iyi dzinoti pombi kutevedza tsika ISO2858 uye GB6245
Previous: chinjikira mahwanda moto-kurwa pombi
Next: chinjikira kuroorwa Danho moto-kurwa pombi boka
Fire Kurwisa Water Pump
Fm vanotenderwa Fire Fighting Pump
chinjikira kuroorwa Danho moto-kurwa pombi boka
multistage moto-kurwisa pombi boka
Single kubvisa multistage secional mhando moto-va- ...
multi-Danho Mapaipi moto-kurwa pombi
chinjikira multi-Danho moto-kurwa pombi
mira multi-Danho moto-kurwa pombi
ndokuberekera Well Submersible Pump , Double kubvisa Split Case Pump , abudise kupomba Machine , Vertical Inline Pump ,